SomaliTalk.com » Warsaxaafadeed: Ra’iisul Wasaaraha oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxda isboortiga Soomaaliyeed una tacsiyeeyey
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Friday, April 6, 2012 // Jawaabaha waa la xiray
· Ugu horreyntii waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda Isboortiga u dirayaa Tacsi Qaran geeridii naxdinta laheyd ee ku timid Guddoomiyihii Olembikada Qaranka Aden Haji Yabarow Wiish iyo Madaxii Xiriirka Kubadda Cagta Siciid Maxamud Nuur (Mugabe).
· Gacan ka xaqdaran baa dishay, Dowladdu waxey bilowday baaritaan dhab ah oo ku wajahan sababta keentay in gabadhaas ay soo gasho Tiyaatarka oo ay qarax noocaas oo kale ah ka geysato goob ay ku sugan yihiin madaxdii dalka.
· Wiish iyo Muganbe waxey waqtigooda u hureen sidii Isboortiga Soomaaliya uu u horumari lahaa.
· Gaar ahaan Aden Yabarow Wiish waxuu in muddo ah ku soo dhexjiray Isboortiga waxuuna ahaa aabihii Isboortiga ee suurto geliyey in Somalia ay ka dhex muuqato cayaaraha olembikada Adduunka oo sanad walba uu ku matali jirey Soomaaliya. Gaar ahaan 20kii sano ee aan fowdada ku jirnay Wiish waxuu ku guuleystay in Isboortiga uu sii noolaado oo uu mideeyo shacabka Soomaaliyeed. Wiish waxaa kaloo lagu xasuusanayaa guulihii gabdhaha Soomaaliyeed ka soo hoyeen tartankii kubadda koleyga ee ka dhacay Doha, Qatar.
· Wiish waxuu ku howlanaa sidii Olembikada Soomaalida ay uga qeyb-qaadan laheyd tartanka Olembikada London ka dhacaya bisha Julay. Olembikada Soomaaliya waxaa laga rabaa inay sii joogteeyaan howlihii muhiimka ahaa ee uu waday Wiish.
· Siciid Mugabe waxuu waqtigiisa u huray horumarinta Isboortiga gaar ahaan kubadda cagta, waxuuna ku guuleystay in cayaarihii gobolada ay dalka gudihiisa ku qabsoomaan sanadkii hore, iyo weliba in Muqdishu lagu qabtay tartankii degmooyinka ka dib markii kooxaha nabaad diidka ah laga xorreeyey caasimadda.
· Bahda Isboortiga iyo dhammaan Soomaalida waxaa laga rabaa inaysan ka yeelin kooxan argagaxisada ah inay hor-istaagaan is-dhexgalka bulshada iyo Isboortiga.
· Isboortigu waa muhiim waxuuna bulshada ku horseedaa is-dhexgal, wallaaltinimo, is-jeceyl iyo mdinimo. Isboortigu waa caafimaad isla markaana dhisa maskaxda dhalinyarada.
· Dowladdu waxy diyaar u tahay inay Isboortiga dhiirigeliso, isla markaana u fidiso waxii saacidaad ah. Sidoo kale Bahda Isboortiga waxaa laga rabaa inay sii labo-jibaaraan dadaaladooda.
Ra’iisul Wasaaraha oo booqday dhaawacyada Isbitaalada Madiino iyo Daarul Shifa